> Resource > iPhone > Apple Taageerayaasha waa in ay ogaadaan: Taariikhda A Visual ah iPhone iyo macruufka [Infographic]
On January 9, 2007, Steve Jobs soo bandhigay ah bandhig-diridda cajiib ah, isagoo sheegay in dadka uu ku keeni lahaa phone kacaanyahan ah mobile, balaadhan-screen iPod la gacanta ku taabto oo ah qalabka isgaarsiinta internet horumar degdeg ah. Laakiin waxa aan ahaa saddex alaabta. Waxaa ka mid ahaa. Haa, waxay ahayd iPhone. Apple abid yiri:
"IPhone waa wax soo saarka ee Kacaanka oo sixir ah in macno ahaan waa shan sano ka hor telefoon kasta oo kale oo mobile," ayuu yiri Steve Jobs, CEO Apple ee. "Waxaan oo dhan dhashay tilmaanta kama dambaysta ah qalab-our faraha-iyo iPhone isticmaalo si ay u abuuraan ugu kacaanyahan user interface tan iyo jiirka. "
Next, aynu hubiyo sida iPhone koraa ka mid hore ee jooga iPhone 5S iyo iPhone 5C ah, sidaas sameeya macruufka ah, ka version ugu horeeyay ee mid ka mid ah dambeeyay toddobaad.
Isbedelka ka soo dhigyo horumarinta iPhone ee:
Asalka ah iPhone: Apple sii qaabaynaya telefoonka kula iPhone
The iPhone 3G: Labo sida ugu dhakhsaha, qiimaha qeybtii
3GS iPhone The: dhakhso badan oo awood leh
iPhone 4: Tani waxay bedelaysaa wax kasta. Mar
iPhone 4s The: Waa la yaab leh ugu iPhone weli
iPhone 5: Waxa ugu weyn ee ku dhaca iPhone
The iPhone 5C: Waayo midabo
ayaa iPhone 5S: fikirka Forward
Muxuu noqon doonaa mid ka mid ah ee soo socda?